Ch3मार्क – 2माछा
घर / बाइबल / मार्क को सुसमाचार / Ch3मार्क
3:1 अनि फेरि, उहाँले सभाघरमा मा प्रवेश. र एक withered हात थियो त्यहाँ एक मानिस त्यहाँ थियो.
3:2 र तिनीहरूले उहाँलाई अवलोकन, उहाँले Sabbaths मा उपचार हुनेछ भने हेर्न, त्यसैले तिनीहरू उहाँलाई दोष हुन सक्छ.
3:3 र त्यो withered हात थियो जसले मानिसलाई भन्नुभयो, "बीचमा उठ।"
3:4 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "यो न्यायसंगत पनि Sabbaths मा राम्रो गर्न छ, वा दुष्ट गर्न, एक जीवन स्वास्थ्य दिन, वा नष्ट गर्न?"तर तिनीहरू मौन बसे.
3:5 र रिस तिनीहरूलाई मा वरिपरि देख, आफ्नो हृदय अन्धो भन्दा धेरै saddened भइरहेको, उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो, "आफ्नो हात टिक्ने।" अनि उहाँले यो विस्तार, र आफ्नो हात उहाँको पुनःस्थापित थियो.
3:6 त्यसपछि फरिसीहरू, बाहिर जा, आफूविरुद्ध Herodians संग तुरुन्तै सल्लाह लिए, तिनीहरूले उहाँलाई नष्ट हुन सक्छ कसरी रूपमा.
3:7 तर येशूले समुद्र आफ्ना चेलाहरूलाई संग हटाउनुभएपछि. र एक ठूलो भीड गालील र यहूदियाबाट उहाँको पछि लागे,
3:8 र यरूशलेमबाट, Idumea देखि र जोर्डन मार्फत र. र टायर र Sidon वरिपरि ती, सुनेपछि के उहाँले गरिरहेको थियो, ठूलो भीड उहाँलाई आए.
3:9 र उहाँले एउटा सानो डुङ्गा उहाँलाई उपयोगी हुनेछ भन्ने आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्नुभयो, भीड को किनभने, नत्र तिनीहरूले उहाँमाथि प्रेस.
3:10 लागि उहाँले धेरै निको, रूपमा थियो घाउ रूपमा थुप्रै उसलाई स्पर्श गर्न उहाँलाई तिर हतार भनेर.
3:11 र अशुद्ध आत्माहरू, जब तिनीहरूले उहाँलाई देखे, उहाँलाई अघि लमतन्न परेर पसारिएका. अनि तिनीहरूले यसो भन्दै कराए, यसो,
3:12 "तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।" अनि उहाँले कडा तिनीहरूलाई यस्तो सल्लाह दिए, तिनीहरूले उहाँलाई प्रकट नत्र.
3:13 र एक पहाड मा उक्लनुभन्दा, he called to himself those whom he willed, and they came to him.
3:17 and also he imposed on James of Zebedee, र यूहन्ना जेम्स को भाइ, the name ‘Boanerges,'छ, ‘Sons of Thunder;'
3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, र अल्फयसको जेम्स, and Thaddeus, and Simon the Canaanite,
3:19 र यहूदा इस्करियोत, जो पनि उहाँलाई धोका.
3:21 And when his own had heard of it, they went out to take hold of him. तिनीहरूले भने लागि: “Because he has gone mad.”
3:28 Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, that all sins will be forgiven the sons of men, and the blasphemies by which they will have blasphemed.
3:30 तिनीहरूले भने लागि: “He has an unclean spirit.”
3:31 र आफ्नो आमा र भाइहरू आइपुगे. र बाहिर खडा, तिनीहरूले उहाँलाई पठाइएको, उसलाई कल.
3:32 र भीड उहाँको वरिपरि बसिरहेका थिए. र तिनीहरूले उहाँलाई भने, "हेर, आफ्नो आमा र आफ्नो भाइ बाहिर छन्, तपाईं खोजिरहेका। "
3:33 अनि तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया, उहाँले भन्नुभयो, "मेरो आमा र मेरा भाइहरू हो?"
3:34 र ती मा वरिपरि देख गर्ने उहाँको वरिपरि सबै बसिरहेका थिए, उहाँले भन्नुभयो: "हेर, मेरो आमा र मेरा भाइहरू.
3:35 परमेश्वरको इच्छा गर्नुभएको छ जसले लागि, एउटै मेरो भाइ हो, र मेरी बहिनी र आमा। "